Izibingelelo ukusuka kuSeptemba 1 ukuya kubafundi: ezihlekisayo kwivesi, iprose, ii-sms kunye nemifanekiso evela kubazali, oogogo, ootitshala. Ndiyakuvuyela intombazana yokuqala kunye nomfana
Kuza ixesha lexesha lesikolo elilinde ixesha elide kubo bonke abafundi, kubandakanywa, kunye nalabo abaya kwiklasi yokuqala ngokokuqala ngqa. NgoSeptemba 1 ngumhla oqaqambileyo xa intsimbi yokuqala ibhala ngomgca wesikolo kunye nomfundi osandul 'ukwenziwa nje ukuza kungena kwihlabathi elitsha-ihlabathi yolwazi, ukufumanisa kunye nempumelelo enkulu. Kwimeko nayiphi na into, usuku lokuqala lwekwindla yiholide kubo bonke abafundi, bobabini bokuqala kunye nabaye batyelela ubuncinane kanye kwilizwe le sikolo baze baphinde bahambe apho banomdla kunye nokulindela okumnandi kokuqala konyaka wokufunda. Ngomhla woLwazi, kunomdla kakhulu ukunika uvuyo kakhulu kubafundi ngoSeptemba 1: utitshala weklasi ubapha iingcebiso ezibalulekileyo kunye neengcebiso ezifanelekileyo, ukumema abantwana kwisikolo esitsha. Abazali, kunye nootatomkhulu, njengomnye umntu, bayonwabile ngomntwana othandekayo kwaye bayamnqwenela ukuba abe ngumfundi othobekileyo, othobelayo onokuthobela esikolweni. Kwinqaku esiyikhethile ukuba unqwenela ukuba ufuna abafundi abaza kunceda ukudala i-festive atmosphere kwaye baza kunika isibindi nokuzithemba kumntu omncinane ongena kwihlabathi elikhulu lolwazi nezakhono.
Kwiminyaka emininzi kulo lonke elaseSoviet Union, uSeptemba 1 ngowokuqala kobomi bemfundo ezikolweni nakumaziko aphakamileyo emfundo. Kwaye kwithuba elithile ngoku liye lahamba kunye neziphakamiso ezithembekileyo ngendlela yolawulo, iinkqubo zekonsathi kunye nezifundo zehlabathi (iiyure zeeklasi), ezihloko eziphambili zezicwangciso zophando olongezelelweyo, intlanganiso yekwindla kwaye, ngokuqinisekileyo, bayabingelela okanye baqhelane neentonga zamanqaku. Usuku loLwazi ngumzuzu okhethekileyo othakazelisayo, bobabini kubafundi bebanga lokuqala, kunye nabo bonke abanye abantwana besikolo ukuya kwiiklasi eziphezulu. Abantwana kunye nentsha, befumana amandla phezu kweeholide zasehlotyeni, balungele ukuphinda baphinde baphumele elwandle olukhulu kolwazi olutsha kunye nolwazi oluncedo. Ewe, phambili kuya kuba yimihla enzima ngokunyanzelisa nokulawula, imisebenzi emisebenzini yasekhaya kunye nemisebenzi engaphezulu kwekharityhulam. Nangona kunjalo, konke oku kuya kuhlawulwa ngokuthandana ngentsholongwane kunye noontanga, ukufumana abahlobo abatsha kunye nolwazi olunomdla olutsha. Nangona umculo udlala emgceni, abantwana banomdla kakhulu kwintlanganiso kunye nabahlobo, kwaye abazali nabafundisi baya kubakholisa ngoomdlalo ococekileyo ngoSeptemba 1, ukuze abafundi babo abathandekayo bazive bevuya kwaye bevuya! Kuye uza kufumana iinqwenelelo ezikhethiweyo kunye nokuhlaziya kwimo yevesi kunye neprose, ngendlela yeefesi ezimfutshane kunye neefom. Konke okufuneka ukwenze kukukhetha nayiphi na iindinyana ezithandwayo, amazwi alungileyo kwaye ubhalele kwiposikhadi enemibala, shicilela kumshicileli wemibala, wenze iphephandaba lwedonga okanye ulikhumbule ngentliziyo! Abantwana bakho baya kuvuyiswa gqitha xa ubavuyela ngemibongo ehlekisayo okanye ibinzana.
Ukuthokoza ngokusuka kubafundi ukususela ngoSeptemba 1 kwiprose nevesi
Ngomhla we-1 kuSeptemba, intlonelo evulekileyo kunye ekhanyayo kwizandi zomkhosi kwilizwe lonke, kodwa iincwadana ezithandekayo, izibhengezo ze-banal zivakala phakathi kwabo, endaweni engathanda ukuba ndiyive ngayo inkondlo engundoqo kunye nezifiso ezilungileyo kubafundi. Le ngqokelela iqulethele kakhulu kwivesi kunye ngamazwi akho (ngeprose). Bangakwazi ukufundelwa kubazali bobabini kunye nootitshala beeklasi eziprayimari, eziziisekondari kunye nabaphezulu. Khetha ukhetho lwakho nawuphi na ukubingelela ukususela ngoSeptemba 1 kwaye nceda bafunde abafundi abanamagama amahle, anomnene kunye achukumisayo. Ngokuphindaphindiweyo isikolo sikulungele ukufumana abafundi. Nina nonke unyaka uneminyaka ekhulile, eninzi kakhulu, enamava. Baqala ukuqonda ngakumbi. Iimpawu ezintsha kunye nezinto eziphambili ziye zavela. Kukho iminqweno emitsha. Ngoko ke, vumela lo nyaka unyaka wokufunda, uzalise zonke izinto ozilindeleyo ngokupheleleyo! Vumela amathuba amatsha aphakanyiswe kukusondeza amaphupha akho. Khumbula ukuba ukunyamezela kukukhokelela ngokuzithemba ngaphambili. Kwaye umsebenzi kuphela uza kukunceda ukuba ube yinto oyijonga ngayo kwikamva! Ngoko qalisa ukwenza namhlanje, ungalindi ngomso! Kwaye ke iphupha lakho liza kuba lisondele ngosuku! Ngosuku lokuqala lwenyaka wesikolo, abafundi.
Ndiyakhumbula indlela abanye benu bema bancinane kakhulu, benamehlo amakhulu ngaphandle kokuqonda nantoni na. Kwaye namhlanje ukhule ngokupheleleyo, uhluke ngokupheleleyo. Ngamehlo unokubona ukuzithemba, ukunyaniseka kunye nenjongo. Ndiyabona ukuba ngamnye wenu unenjongo, kukho indlela ozama ngayo namhlanje. Ndifuna ukukuxelela ukuba isikolo sethu siyaziqhenya ngabafundi bakho njengawe! Ukuba akukho mkhawulo kwiqhayiya lethu. Emva kwakho konke, uzayo lethu! Ngaloo nyaka unokukuzisa amathuba namaphulo amatsha. Into eyona nto kukuba uhlala entliziyweni yakho ukuba uhlale usana, uhlobo olufanayo kunye nokunyaniseka! Umhlali ovuyayo weeholide
Ndihlala ndivuyiswa ukujonga ekuseni ngoSeptemba 1 esikolweni. Xa abafundi abavela kuyo yonke indawo baqokelela ngeendlela ezintle, kunye neendonga kunye neentyatyambo ezimnandi! Xa abantwana abancinane kakhulu besikolo bawela kuqala umda wesikolo baze bajonge ngeento zonke. Ndivuyisana nabafundi bethu ekuqaleni komnyaka wezemfundo! Kwaye ndinqwenela wena ngalolu suku, olunye usuku olungakumbi ukuba lusondele kumaphupha akho. Emva koko, ukuze iphupha libe yinyani, umntu makenze imizamo eninzi kwaye ahlale eqhubeka ekuqhubela phambili. Ngeholide nibafundi besikolo. Yenza umsebenzi, funda kwaye ube ngabantu abakhulu!
Ixesha lolwazi olutsha, olufanelekileyo, Izifundo ezikhanyayo kunye nexesha eliqaqambileyo. Ndikunqwenela imizamo enyanisekileyo, Makhe bazise imimoya ye-autumn. Ukufuna ukuthanda ukufunda ngokukhethekileyo, Zama ulwazi ukuze uzenzele! Funda okufanelekileyo, kwaye ungazi ukuba ungaqiniseki - Akukho nolwazi olungcono lokutya kwakho!
Ihlobo liphelile ngokukhawuleza kunanini ngaphambili, kwaye kwakhona ukulawula kwekwindla kubusa unyaka, inkwenkwezi yekwindla iya kukubiza esikolweni kwakhona, kunye nezulu, ilanga. Ngomnyaka omtsha wokufunda ndifuna ukuba unqwenele ukuba ungakwazi ukukhathala, nokudakumba, ubuvila. Vumela abafundi, yonke into iya kuba njalo, Njengoko lo mhla ofudumeleyo kunye nomhle. Ngomhla wokuqala wekwindla, ngolunye usuku lokuqala lwesikolo, Unoyolo ngosuku apho abahlobo badibana kwakhona, Kwiibhodi ezicocekileyo kuboniswa ngesikhohla Namhlanje: Septemba 1! Makhele lo nyaka ulethe impumelelo kuphela, Iiklasi ziphawula zonke kwiidayari, Makube mnandi kakhulu kunye nokuhleka, Akukho kuphelelwa yintliziyo, ukudabuka, ukukhathazeka.
Amantombazane omntwana, ke, maye siye kwiklasi! Intsimbi yokuqala ibhangele kuwe! NgoSeptemba ungasemngceleni, ixesha lokuba wonke umntu kwiidesksi zesikolo, Fumana iincwadi zezifundo, iifomorms kunye neemephu. Iintyatyambo musa ukulibala ukunika utitshala, ukuba kunye nawe ufunde uya kuqonda indlela! Yiba nobumnandi obunomdla, udlale, wenze abahlobo, Yiya kwi-granite yesayensi kungekudala!
Ngomlomo uhalalisele ukususela ngoSeptemba 1 ukuya kubafundi abatitshala, utitshala wesifundo
NgoSeptemba 1, bonke abantwana nabaselula, ootitshala nabazali, ootitshala abaziintloko kunye nomlawuli bonke baqokelela ndawonye emgceni wokumemeza esithi "Hlaphaza!" Unyaka wesikolo esitsha uze uhambe ngokufanelekileyo ukuya eziklasini zeklasi kwiyure yeklasi, apho uthisha weklasi ehalalisela abafundi bakhe NgoSeptemba 1 kunye nokuqala kwexesha lokufunda elinde ixesha elide. Ootitshala, sihlangene kwindawo enye evuyisayo, okuqinisekileyo kuya kukukholisa abafundi. Phrinta naziphi na iindinyana ezicetywayo okanye xelela abafundi bakho ngamazwi: abantwana baya kukubonga ngokuqinisekileyo!
Ngaphambi kwakho amanyathelo okuqala eNwabile kwaye enhle. Sifisa wena uvuyo kunye nokuphefumlelwa ngenhlanhla!
Namhlanje uya kukulila I-bell yokuqala yokwazisa, Ngexesha lokuqala uza kungena kwiklasi, Isifundo sokuqala siza kuqala. Ihlabathi lemilingo lokufumanisa liya kuvula iingcango, kwaye uthisha wakho onomusa uya kukukhokelela phambili!
Inkalipho, umlingisi wokuqala! Ixesha lakho lifikile: Izifundo, njengeeholide, Uya kuphuma ukusasa kusasa! Uya kungena okokuqala esikolweni, kwiklasi yakho yokuqala. Makube nomdla kwaye ujabule Kuya kuba neyure nganye apha!
Ngentsasa insimbi iyakhala.Imnandi, njengentaka. Yilowo nalowo wesifundo sakho masibe yinto yamagama! Kwaye kuya kuba nehlabathi lemilingo Ngaphambi kokuba uvulekele, Masibe neminyaka yonke ibe yimfundo Kuphela ngovuyo lugcina!
Ukuncoma ukunyanzela kunye nokwahlula amagama ukususela ngoSeptemba 1 abafundi abavela kubazali babo
Abazali, ugogo kunye noomkhulu, oomama kunye noonina banokuvuyisa abantwana babo, abazukulu, abazalwana babo ngosuku lwabo olubalulekileyo - umhla xa ixesha lokuhamba ngolwazi olutsha luze luze lufunde ngakumbi kweli hlabathi elinzima. Abancinci bokuqala kunye nabaselula abaselula bayakuvuyela kakhulu ukuva imibukiso yamahlaya emnandi ngoMhla woLwazi ngoSeptemba 1, kunye kunye namazwi amanqabileyo aphuma kwiintsapho zabo kunye nabahlobo. Banike isiqwenga sokufudumala kwakho kulolu suku ekwindla kunye nabafundi bakho abathandayo bayakukhumbula oko kunyaka wonke. Usuku loLwazi ngoSeptemba 1 - Njengeholide lembalwa. Kwaye ukutshintshwa ngo-Oktobha 1 - Iphupha, ewe, baninzi! Ihlobo lasehlobo laseNdiya, Ziziphi izifundo? Ukuhamba ngenyanga, kodwa ekhaya, ubaba unzima. Izifundo, indlu encinci, iincwadi zezifundo, i-Pointer, utitshala, ibhodi - Siyizibophelelo zakho zexesha, kwaye ukulangazelela kwehlobo kwaqala!
Yintoni le - isikolo? Akukho popcorn, akukho Coke, Akukho zixhobo zokudlala, kunye nesayensi enzulu! Imathematika, ukubhala, kunye negumbi lokudlela - ubisi! Yaye i-cutlet yokutya kwasemini, kunye nekhulu leeskese! Siyazazi i-physics, indlela yokudlala ibhola yebhola, indlela yokufunda nokuba ngabahlobo, okokuxabisa kwihlabathi!
NgoSeptemba waphinda wafika kunye nolwazi losuku. Kwaye namhlanje ndiyanincoma ngeli holide. Vumela i-granite nayiphi na isayensi Kwenu, ngokukhawuleza, Ukufundiswa makube nzima.
Ngomhla wokuqala kaSeptemba! Makube nomnyaka wokufunda omtsha Uya kudlulela kuwe, kwaye ulwazi luphelile. Ootitshala benomonde Nokuqatshelwa ngokufanelekileyo, abafundi inzondelelo, imivuzo yokunyamekela! Inhlanhla kwiimvavanyo, iimviwo kunye ne-USE, ixabiso elilindelekileyo, Yiba ngowokuqala yonke indawo!
Hlonipha ngabafundi ukususela ngoSeptemba 1: imifanekiso emihle yoLwazi lweSuku-2016
Ukunwabisayo okuvuyisayo kungaboniswa nje ngefomathi okanye ngamagama akho - kuya kuba kuhle ukuba uhamba kunye novuyo ngemifanekiso enemibala emnandi kumxholo weSeptemba 1 kunye nesikolo. Inketho enhle inokuba yinto yokudala iphephandaba lwedonga ngoSuku loLwazi, oluya kuba neevesi ezihlekisayo kunye ne-collage elinezithombe zabafundi. Ngezantsi uzakubona imifanekiso ekhangayo ekhangayo eyoyihlobisa ngokugqibeleleyo umoya ovuyokileyo kumlawuli obalulekileyo okanye kwiklasi yeyure.
Phrinta nganye imifanekiso esiyinikezelayo kumshicileli wombala kwaye ubonise abafundi kwiKlasi yehlabathi, bawafaka kwibhodi okanye bazinike kwiidesksi. Abantwana baya kuneliseka!
Mfutshane nincoma ngoSeptemba 1 ngohlobo lwemiyalezo yombhalo kubafundi
Ayikho imfihlelo yokuba inkulungwane yesibini phantse yonke isikolo inomnxeba kunye noxhumano lwe-Intanethi. I-SMS emfutshane ukususela ngoSeptemba 1 yinto oyifunayo ukuvuyisana nabafundi abaselula ngosuku lweekwindla, ukuba awunalo ithuba lokukwenza ngomgca. Thumela enye yeengoma ezintle ezinikela ngeSMS okanye kwinethiwekhi yentlalo kumntwana wakho, umntakwabo, umzukulu wakhe, oontanga, umfundi, kwaye uya kukuphendula ngokubulela. Usuku loLwazi lufake kwakhona amalungelo, iAmbam ukudansa ngaphandle kwefestile, kwaye kungekudala amahlamvu aya kuwa, kwaye isibhakabhaka siyanda. Ndifuna ukunqwenela ukuba ufunde isayensi namhlanje, Vumela izifundo ziphumelele, Vumela ilanga likhanyise ngonaphakade!
Uyavuyisana nomhla wolwazi, uSeptemba wafika ngokukhawuleza - Ushiya ihlobo elidlulileyo, ndikunqwenela ngamandla amaninzi, Ngokuqhubekayo, ukusuka kumsebenzi womoya, iNzululwazi isiseko sokuqonda! Kuyafaneleka, kukuhle ukutadisha, iingxaki ngokufunda ukuze ungafundi!
Ndiyakuvuyela ngeliholide yolwazi! Kwaye ndinqwenela ukuba nonke nikhuthele! Ubomi - ezininzi iinjongo, izicwangciso ezintsha, izinto zokuzilibazisa! Kwizifundo musa ukuhamba, Ukusuka kwamandla okugqibela ukufunda! Amakhulu ezincwadi zokufunda, Amanqaku amaninzi okubhalwa, Izibongo ezilungileyo zokufundisa, Ukufumana "ezihle kakhulu"! Ncedani abahlobo enkingeni Esikolo nakwiindawo zonke!
Ukuncoma ukunyanzela umgcini-wokuqala ukususela ngoSeptemba 1: intombazana kunye nenkwenkwana
Usuku lufika xa umntwana wakho othandekayo eqala ukwazi umhlaba omtsha ongatshatanga. Ngentsimbi ekhuni emva kwamagxa akhe, ezele iincwadi zokubhala, ipenki kunye neepensele zombala, amantombazana amancinci kunye namakhwenkwe amancinci angena ngaphaya komngcele wesikolo esikolweni aze aphile ubomi obutsha ngokutsha, ugcwele iimbandezelo, uvuyo, iintlungu ezincinane kunye nokunqoba, umzabalazo wolwazi kunye namabakala amahle. Banike ikhadi lokubulisa lomgcini-mhlaba wokuqala ngo-Septemba 1 (esifanelekileyo kwinkwenkwe nentombazana), kwaye ngokuqinisekileyo umntwana wakho uya kukubonga ngemigudu yakho kunye nomnqweno wokwenza ujabule. Ngomgca wesikolo ufikile okokuqala, Namhlanje abaqalayo kubaluleka baqala ukubaluleka, Ithemba kunye nekamva elizweni lakho, Namhlanje kufuneka nje uzame kancane! Sifuna ukufunda kuphela "ezintlanu", Masibe nethamsanqa nonke, bantwana, Zonke iincwadi ziyakuthandeka ukufunda, Ukufumana ilifa!
Njengokuba i-sparkles iyatshisa, Ngamehlo okuqala, i-graders kulolu suku, Konke kufana nefestile! Namhlanje ungcono, Zonke zihle namhlanje! Le yimpumelelo encinane, ebomini besikolo sakho! Vumela amaphupha azaliseke, Uya kuvuya, Yamkela iintliziyo zethu, Iingqungquthela kunye novuyiso!
Ngomhla wolwazi ndiyanincoma, Namhlanje ukhawuleza kwiklasi lokuqala ... Ngomomotheka ndiza kukufisa nakwezinye izifundo, njengamanje. Ngoko isifundo ngasinye sinomdla Okubonakala ngathi yonke imihla! Ngoko ukuba kwiintsuku zesikolo, ukufunda okumangalisayo kwakungekho buvila!
Umlingisi wokuqala, mhlobo othandekayo! Ufuna ntoni? Ilanga nokufudumala ... Kodwa ungaphumuli! Ukubamba isayensi ye-granite Ufuna iintsuku nobusuku. Amaphupha akho aya kuzaliseka, Ukuba ufuna kakhulu!
Uvuyo olukhulu ngoSeptemba 1 wokuqala umgcini kubazali, ugogo nomkhulu nomkhulu
Olunye ukhetho oluvuyisayo ngoMhla woLwazi ngoSeptemba 1, 2016 kulabo bangena kwihlabathi lehlabathi kwaye bajonge phambili xa uhlala uhlala edeskini uze uphulaphule utitshala wakho. Umqambi wokuqala ufumana ukuhlawuleka okubaluleke kunabo bonke abasondeleyo kunye nabathandwa kakhulu: abazali, abazalwana kunye nodade abadala kunye nootatomkhulu. Kwaye ukuba bavuyisela njani abafundi babo kwikamva ngomhla kaSeptemba 1, kuxhomekeke kwisimo sengqondo esithile esikolweni. Nika imibongo yakho engcono ngeSuku loLwazi kumntwana wakho, kwaye ngamazwi akho sifisa ukuba abe ngumfundi okhaliphile, onesibindi nothobelayo. Namhlanje kuya kuba ngowokuqala, Xa uhamba, kwiklasi yokuqala, kwaye vumela le nto ibhale, Kulo sifundo esilindele kakhulu!
I-autumn ibuye kwakhona, Ukutyelela ummandla wethu. Kwaye bonke abafana bayagubha Ngethuba loSeptemba. Unyaka wokufunda-unyaka onzima, kodwa ungumzukulwana ongazilibala. Isikolo sivula iingcango, Ukukhokelela ihlabathi ngolwazi. Sinqwenela wena umzukulu, kwidayari ukuba ube nehlanu kuphela. Musa ukuxhoma ifu - Ifu elinokuhluleka okukhulu. Sikholwa, siyazi-unokwenza konke, Uhlakaniphile kuthi. Yaye myeke umzila wesikolo kwaye unzima, Akunzima ngamanye amaxesha, Yazi ukuba siseduze nawe, Ukuba kukho into - uya kuthi. Yonke esiya kuyenza, siya kuvula zonke - Siza kufumana iindlela ezilula. Emva kwakho konke kukuthanda kakhulu, Siyakuvuyela ukukunceda, Masiphinde sikuvakashele ekwindla, Esikolo sakho indlela evuyayo. I-autumn ibuye kwakhona, Ukutyelela ummandla wethu. Iminyango yesikolo yavuleka, Emva kokuqala kukaSeptemba ...
Umzukulu-wokuqala wokuqala kwisikolo Esikolo ukuqonda i-sayensi Thina namhlanje ungumzukulu. Usuku olukhethekileyo kuthi - yonke intsapho - kwiklasi lokuqala! Usana lwethu, wena prankster, prankster, Nguwe namhlanje umlingisi wokuqala! I-satchel ihlanganisene, abahlobo balindile, Asikwazi ukukhawuleza! Insimbi iya kubeka intsimbi, Kuya kuba nomsebenzi wesikolo ukuqhubeka - Ungakhathazeki, sinako nawe, Oyithandayo kuqala! Kubalulekile ukunyuka kwamakhulu omkhulu. Sekude ephupha ukuba umzukulu wakhe othandekayo uya kuba ngugqirha wezesayensi. Kodwa ngelixa idesksi yesikolo Kufuneka ukuba ubhale i-notebook ngendlela ecocekileyo, Ukufunda amagama kwiilwimi zamagama kunye nokufunda yonke into, ukukhuthaza, ukuba uvila. Kwaye xa usuka esikolweni, Siya kuba nomthendeleko ovuyoleyo, Ukuze ukwazi ukunambitha i-pie e-Sweet-pie's!
Emaqabini aphuzi, yonke imithi, Kodwa malunga nomyezo, libale, Kuya kuba nezihlandlo zesikolo, Kwiklasi lokuqala, wonke umntu ulindele! NgoSeptemba 1, 2016 - iholide elide elilindelwe ixesha elide kubo bonke abafundi, abafundi, oomama, ootata, nootatomkhulu, kwaye, ngokwenene, ootitshala. Ngomhla woLwazi, abazali nabafundisi bafunda ukuvuyisana kakhulu ngoSeptemba 1 kubafundi - abantwana babo kunye newadi, abagqweswa kwixesha elizayo kunye neengcali. Kakade, yonke ingqalelo kulomhla inikezwa kubafundi abasemncinci - abantwana bokuqala, kodwa abanye abantwana bafumana iimvakalelo ezithandekayo kunye nomdlalo omnandi oza kuqhubeka unyaka wonke. Nika umntwana wakho ulwandle olumnandi, uvuyo nolonwabo kulusuku oluhle lwekwindla ukwenzela ukuba angene kwihlabathi elingaziwa ngokuzithemba nangokuvuya. Ngeeholide yabafundi bakho abathandekayo, kunye noMhla woLwazi-2016!
Inja ibonakalisa uNyaka omtsha 2018 ngezandla zakhe, iiklasi zokufundisa
Umzekelo we-Pancake Day 2017 esikolweni, i-kindergart kunye nesitalato kuwo onke amaxesha-Imidlalo kunye nemincintiswano yemikhosi yeShrovetide Maslenitsa
Unyaka omtsha wonyaka we-2017: uyathokoza ngabahlobo kwimifanekiso, ivesi kunye neesms. Ukuhlwayela okumnandi kunye nokufutshane kukuvuyisana noMnyaka omtsha
Ukubingelelwa okumnandi kunye ne-Pancake ngeveki 2018 kwimibongo emihle, i-SMS emfutshane kunye neepastadi ezikhanyayo
Usuku lwe-Cosmonautics lwe-kindergarten-script kunye nemizekelo yemidlalo, ukhuphiswano lwabantwana - kwinqanaba eliphakathi kunye nelungiselelo - Iingcamango zemihla yoSuku lwe-Astronautics kwi-kindergarten
Ukuncoma ngokunyanisekileyo ngomhla woMsebenzi we-Medical u-2017: imifanekiso emihle kunye neengoma ezihlekisayo
Usuku lwe-tankman lufutshane kwaye luyathokoza ngokunyanisekileyo kwiprose, izibongo kunye nemifanekiso. Ngumhla onjani umhla we-tanker 2016 eRashiya nase-Ukraine?
Indlela yokukhulisa abantwana ngaphandle kwesijeziso?
Izifo ezithintekayo zesini ngexesha lokukhulelwa
Iziphuzo eziphilileyo zempilo
Ungamnceda njani umntwana ukhethe uqeqesho?
Imveliso yokunyamekela ngezandla
Indlela yokuqonda ubuxoki kunye nento oyenzayo xa ukhohlisiwe
I-Parfait evela kwipapa, amajikijolo kunye ne-yogurt
I-poppy ikhekhe kunye ne-yoghurt kunye ne-tshokoleta
I-saffron sauce yokutya izitya
Ukutya okunempilo ekusebenzeni ngokusemgangathweni
I-allergies isikhumba, ukutya, ukunyuka kwamayeza
Isaladi kunye nebhekoni, radicchio kunye nengqolowa